View Street waa mid halis ah Europe - Geofumadas
View Street waa mid halis ah Yurub
Oktoobar, 2008 Google Earth / Maps, tabo cusub
Dhawr cisho ka dib markii Google lagu soo bandhigay Spain afar magaalo oo ku taal wadada jidka, ayaa la bilaabay afar magaalo oo Talyaani ah oo muujinaysa isbeddel ku yimid Yurub oo tilmaamaya in mustaqbalku noqon karo Germany ama England. Magaalooyinka Talyaaniga ee lagu daray waxaa ka mid ah Rome, Milan, Florence iyo Lago di Como.
Waa iska cadahay in Google uu ku xiran yahay meelaha laga helo internetka, laakiin waa in aan xusuusanno in xaqiiqda ah in Spain ay tahay dalkii labaad oo lagu doorto Yurub wuxuu ahaa muunad qiime u leh bulshada Isbaanishka ah. Mid ka mid ah dhinacyo xiiso leh oo ku saabsan bilaabista Spain ayaa ahaa Ololaha xayaysiinta iyo istiraatijiyado istiraatiiji ah oo lala yeesho shirkado kuwaas oo hirgeliyay codsiyada diyaar u ahaa in la furo.
Markii hore, Panoramio wuxuu tusaale u ahaa casriga Hispanic, hadda waxaa la filayaa in Google Street View aragtida ganacsiga yaryar la isugu dari doono oo bixiya dadka isticmaala waa maxay ganacsiyada ganacsiga. Xayeysiisyada ayaa noo soo diray qaabka pdf, halka on bog lagu keydiyo Goobaha Google waxay haysaa macluumaadka la heli karo, oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan istiraatiijiga isgaarsiinta waa:
Dhiirrigelinta guud ee mobile
«Hayso tikniyoolajiyadda khariidadaha Google ee jeebkaaga. Adoo leh Khariidadaha Wadooyinka Google ee mobiilka, mar dambe
mar kale ayaad lumin doontaa
Mar walba waxaad u baahan tahay inaad heshid cinwaanka aad ku jirto hortiisa kombuyuutarka. Sidaa darteed, waxaan haynaa
Muuqaalka muuqaalka waddada ee dariiqyada Google ee loogu talagalay mobile.
Dallacsiintan wuxuu diiradda saarayaa casriga ugu dambeeyay ee waxqabadka Google Earth ee isticmaalka qalabka mobile.
Kor u qaadista dhinaca dhamaadka dadka isticmaala
Khariidadaha Khariidadaha ee Google
Talooyinka isticmaalka 10 ee isticmaalayaasha shakhsi ahaaneed
Hagaha xilliga firaaqada ee lanetro wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah shirkadaha hormarka ah ee isticmaalaya adeegga "Street View" si ay u caawiyaan isticmaalayaashooda qorsheeyaan waqtigooda xorta ah waxayna horay uga shaqaynayeen fulinta mashruuca. "Waxaan rajeyneynaa inaan sii wanaajinno dalabkayaga iyo adeegyadayada xilliga firaaqada ah ee fulinta Google StreetView," ayuu yiri Juan Vallejo, oo ah maamulaha lanetro.com. "Waxaa mahad leh faa'iidooyinka awood u leh in ay muujiyaan sawirka wadada jidka ama jidka waddada, qof kasta oo isticmaala ayaa si muuqata u kobcin kara waayo-aragnimadooda boggeena internetka."
Kor u qaadida horumarinta API
Shirkadaha ku lug leh soo saarida waxaa lagu dhiirrigeliyay dadaalkooda in ay aqoonsadaan isticmaalka kala duwan ee alaabta ee dalxiiska, hantida maguuraanka ah iyo qaybaha waxbarashada, taas oo u ogolaaneysa, tusaale ahaan, si fudud u heli kartaa shirkado yaryar iyo goobo yaryar.
fotocasa.es oo ah bogga ugu horeeya ee hantida maguuraanka ah ee Spain si loogu daro adeegga Google Street View liiska hantidaada. "Marka la eego Google Street View isticmaalayaasha waxay arki karaan dariiqyada iyo xitaa xaafadaha guryaha ay xiiseynayaan ay ku yaalaan, macluumaadka u sahlaya inay iibsadaan ama ijaaraan," ayuu yiri Mónica Espina, agaasimaha maamulka shirkada guryaha, Mónica Espina .
Iyaga oo ku xiga ololahan, a wargeyska xayasiinta mawduuca
Talooyinka isticmaalka 10 ee shirkadaha iyo ururada
Waqtiga wanaagsan ee deegaankeena Hispanic, waxaan arki doonaa cidda soo socota, haddii aad rabto in aad aragto tusaalooyin Tilmaamaha wadada Talyaaniga waan ku talin blog-kan waa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad.
Post Previous«Previous Spain, waddanka labaad ee Yurub ayaa leh aragti wadada
Post Next Fiidiyeyaasha si ay u bartaan Manifold iyo ArcGISNext »